စာရင်းအပြည့်အစုံ SQL Server MDF ဖိုင်အမှားများနှင့်ပြ.နာများ
ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ DataNumen SQL Recovery ပြည့်စုံသောအမှားများစာရင်း
SQL Server အမှားအယွင်းများ
အတွင်းရှိအမှားအယွင်းများနှင့်ပြProbleနာများစာရင်း SQL Server MDF ဒေတာဘေ့စ်ဖိုင်များ
သငျသညျ Microsoft ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ SQL Server အဂတိလိုက်စားထားသော MDF ဒေတာဘေ့စ်ကိုချိတ်ဆက်ရန်သို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ရန်အမှားအယွင်းအမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအမှားများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစု။ ၎င်းတို့ဖြစ်ပေါ်နေသောကြိမ်နှုန်းနှင့်အညီစီရမည်။ အမှားတစ်ခုစီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏လက္ခဏာကိုဖော်ပြပြီး၎င်း၏တိကျသောအကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြပြီးနမူနာဖိုင်များနှင့်ငါတို့သတ်မှတ်သောဖိုင်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည် DataNumen SQL Recovery, သူတို့ကိုသင်ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်အောင်။ သင်၏အဂတိလိုက်စားမှုကိုဖော်ပြရန်အောက်တွင် xxx.MDF ကိုအသုံးပြုမည် SQL Server MDF ဒေတာဘေ့စ်ဖိုင်အမည်။
အခြေခံ SQL Server (သို့) CHECKDB အမှားသတင်းများ၊ အမှားသုံးမျိုးရှိပါသည်။
ခွဲဝေချို့ယွင်းချက်: MDF & NDF ဖိုင်များမှအချက်အလက်များကိုခွဲဝေပေးသည်ကိုငါတို့သိသည် စာမကျြနှာ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းခွဲဝေစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသုံးပြုတဲ့အထူးစာမျက်နှာများရှိတယ် -
GAM စာမျက်နှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခွဲဝေချထားပေးမှုမြေပုံ (GAM) အချက်အလက်သိုလှောင်ထားပါ။
SGAM စာမျက်နှာ စုပေါင်းထားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခွဲဝေချထားပေးမှုမြေပုံ (SGAM) အချက်အလက်ကိုသိုလှောင်ထားပါ။
IAM စာမျက်နှာ အညွှန်းကိန်းခွဲဝေမြေပုံ (IAM) အချက်အလက်။
PFS စာမျက်နှာ PFS ခွဲဝေမှုအချက်အလက်သိုလှောင်။
အထက်ပါခွဲဝေချထားပေးသောစာမျက်နှာများတွင်အမှားများရှိပါကသို့မဟုတ်ဤခွဲဝေချထားပေးသောစာမျက်နှာများမှစီမံခန့်ခွဲသောဒေတာများသည်ခွဲဝေခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်မကိုက်ညီပါက SQL Server သို့မဟုတ် CHECKDB ကတင်ပြလိမ့်မည် ခွဲဝေချို့ယွင်းချက်.
ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအမှားများ: ဘို့ စာမကျြနှာ ဒေတာစာမျက်နှာများနှင့်အညွှန်းစာမျက်နှာများအပါအဝင်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်အသုံးပြုသည် SQL Server သို့မဟုတ် CHECKDB သည်စာမျက်နှာပါအကြောင်းအရာများနှင့်စစ်ဆေးမှုအမှတ်အသားကြားတွင်ရှေ့နောက်မညီမှုများရှိကြောင်းတွေ့ရှိပြီးနောက်၎င်းတို့ကတင်ပြလိမ့်မည် ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအမှားများကို။
xxxx.mdf သည်အဓိကဒေတာဘေ့စ်ဖိုင်မဟုတ်ပါ။ (မိုက်ခရိုဆော့ SQL Server, အမှား - 5171)
'xxxx.mdf' ဖိုင်၏ခေါင်းစီးသည်မှန်ကန်သောဒေတာဘေ့စ်ဖိုင်ခေါင်းစဉ်မဟုတ်ပါ။ FILE SIZE ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်မမှန်ကန်ပါ။ （Microsoft SQL Serverအမှား - ၅၁၇၂）
SQL Server မမှန်ကန်သော checksum: တစ်ယုတ္တိကိုက်ညီမှု -based I / O အမှားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်
SQL Server ယိုယွင်းစာမျက်နှာ: ယုတ္တိကိုက်ညီမှု -based I / O အမှားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်
SQL Server ခေါ် built-in tool တစ်ခုရှိပါတယ် DBCC, သောရှိပါတယ် အချစ် နှင့် စစ်ဆေးရန် အကျင့်ပျက် MDF ဒေတာဘေ့စ်ကိုပြုပြင်ရန်ကူညီနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများ။ သို့သော်ဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးသွားသော MDB ဒေတာဘေ့စ်အတွက်၊ DBCC စစ်ဆေးသည် နှင့် စစ်ဆေးရန် ကျရှုံးလိမ့်မယ်
CHECKDB မှတင်ပြသောရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအမှားများ -
sys.xxx တွင် Row ထဲတွင်လိုက်ဖက်သောအတန်းမရှိပါ။
Table error - Object ID ##၊ index ID ## ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။
ဤစနစ်ဇယားအညွှန်းကိုပြန်ဖွင့ ်၍ မရပါ။
object ID ##၊ index ID ##၊ partition ID ##၊ unit ID ## (အမည်မသိအမျိုးအစား) ကိုခွဲဝေချထားပါ၊ စာမျက်နှာ ID (##: 560) တွင်၎င်း၏စာမျက်နှာခေါင်းစီးတွင်မမှန်ကန်သောစာမျက်နှာ ID ပါရှိသည်။
Index Allocation Map (IAM) စာမျက်နှာကို IAM စာမျက်နှာ၏နောက်ညညွှန်ပြသည်
ဒေတာဘေ့စ် ID ## ရှိ Extent (##: ##) ကို GAM တွင်ခွဲဝေမှတ်သားထားသော်လည်းမည်သည့် SGAM နှင့် IAM မှမျှခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါ။
မအောင်မြင်ပါ။ (- #######)“ DBCC CHECKDB (xxxx) NO_INFOMSGS” ဖြင့်စုံစမ်းမှုကိုအောက်ပါအမှားနှင့်မအောင်မြင်ပါ -“ xxxx”.
ဖတ်ပြီးချိန်တွင် 0x ###### ဖိုင်တွင် 'xxxx.mdf' တွင်တွေ့ရှိသော I / O အမှား (မကောင်းသောစာမျက်နှာ ID) ။
The Log ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ဒေတာဘေ့စ၏လုံလောက်သောကိုသက်ဝင်မရနိုင်ပါ
ဒေတာဘေ့စ်၏ 'xxxx' ထဲရှိ logged operation တစ်ခုကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းစဉ်တွင် log record ID တွင်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။